Ndị na-ere ahịa, Ekwentị Mgbasa Ozi na pọtụfoliyo gị?
Kedu ihe kpatara na't naghị Eji Egwuregwu Egwuregwu?
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 9, 2009 Sunday, Eprel 24, 2016 Adam Obere
Mba, anaghị m ekwu na ndị na-anya ụgbọ ala gburugburu obodo. Echere m na iru ndị ahịa na ndị ahịa site na ekwentị. A na-akpọ nke a dịka Mobile Marketing mana ahụla m ọtụtụ mmadụ na-akpọ ya Ekwentị Mgbasa Ozi n'oge na-adịbeghị anya. E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche Mobile Marketing; SMS/ Text Text ahịa, mobile kachasị ibe weebụ na mobile ngwa bụ atọ ndị kasị pụta ìhè.
Ọ bụ ezie na ụdị ọ bụla nke ịzụ ahịa ekwentị nwere uru nke ya na ọghọm ya ma ha niile na-ekwu na ha nwere ọnụego mgbapụta dị elu, otu ihe gbasara azụmaahịa ekwentị na-enweghị ike ịjụ bụ na ọ bụ ojiji na-amụba. O yiri ka ọ nọ n'ọnọdụ yiri ahịa ahịa email na njedebe '90s na mmalite 2000's, na njedebe nke ịghọ isi ihe n'ọtụtụ usoro ịzụ ahịa.
Ugbua anyị na-ahụ ọtụtụ ụdị azụmaahịa na obere azụmaahịa na-akwalite ụdị mmemme iguzosi ike n'ihe metụtara ozi ederede. Isi music kpọọ na-ere music site mobile kachasị ibe weebụ. Companieslọ ọrụ sọftụwia na-ewepụta mmemme emere naanị maka ekwentị mkpanaaka. Ihe ngosi onyonyo na-eji SMS iji nweta ego site na ebubo izi ozi maka ịtụ vootu mmekọrịta. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akpali ndị na-akwado ya n'oge site na ịdọ aka ná ntị mkpanaka.
Ire ahia ahia nwere uru abuo di egwu karia ndi ozo na ndi ozo:
Ndị mmadụ na-eji ekwentị mkpanaaka ha - yabụ ịbụ oge na ịhụ na ozi ahụ ruru onye nnata bụ ihe doro anya! (Ọ na-abịa na ibu ọrụ, n'ezie.)
Inwe a ahịa ịpụ na-na mobile ahịa na-enye gị a njikọ kpọmkwem jiri akara ekwentị ha.
Otu ezigbo ihe atụ n'iji usoro a eme ihe bụ a atụmatụ ụlọ ala na ụlọ. Anyị na-enye ndị na-ere ahịa ala ụlọ akwụkwọ ozi iji tinye n'ihe onwunwe ha ebe ndị ahịa nwere ike zigara ha ozi ederede maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ụlọ yana njem njegharị. N'otu oge ahụ onye na-azụ ahịa abanyela ma nata nkọwa ahụ, a na-emekwa ka onye na-ere ụlọ mara amara banyere arịrịọ ahụ na nọmba ekwentị ekwentị nwere ike ịzụta ya! Ọbụna anyị na-eme ka ụfọdụ akụkọ ahụ dịkwuo mma site na ịkpọ ụda olu nke onye ọrụ ahụ.
Nke a na - enye onye zụrụ ya ozi niile ha chọrọ - yana nyekwa ụlọ ọrụ ụlọ na ụzọ iji kpọtụrụ na soro onye na-azu ahia. Idebe foto na mpempe akwụkwọ na mbara ụlọ adịghị anabata ọkwa ahụ!
Ajụjụ bụ, kedu ihe ị na-eme iji nweta uru nke azụmaahịa mkpanaka na ọwa mkpanaka? Kedu usoro azụmaahịa ekwentị nke ụlọ ọrụ gị na-ebupụta? Ọ bụrụ na ị na-bụ ụlọ ọrụ ahịa, Mobile Mobulu dị na pọtụfoliyo gị? O kwesịrị!
Tags: mgbasa ozi mgbasa oziMobile na Mbadamba ụrọahịa efumobile ahịa azum
Ihe ntinye 2,000 ma anyi na ebido!
Aug 10, 2009 na 6:07 PM
Amaara m na ị na-akatọ ChaCha n’oge gara aga, mana m ga-ahụ gị n’anya iji kwenye gị na anyị na-eme ụfọdụ ihe ịtụnanya na Mgbasa Ozi Mobile. Ọ ga-amasị m ịkpọ gị na webinar anyị na VP nke Ad Sales, Greg Sterling, na CEO nke 4INFO na-ezukọta - n'eziokwu, ebe nrụọrụ weebụ na-elekwasị anya bụ ịB ENTA ndị ahịa.
Nwere olileanya na ị nwere ike ịga!
Ọ bụ Garrett Eastham
Aug 11, 2009 na 1: 23 AM
Nnukwu echiche. Echere m na mobile yiri ka ọ na-atụ ọtụtụ mmadụ ụjọ, mana ọ bụghị ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ị ga - agwa ndị ziri ezi okwu.
Ihe na-adọrọ mmasị ị na-eme n'akụkụ akụkụ ụlọ. Kwesịrị ịlele akwụkwọ ozi Darren Herman na nso nso a (http://bit.ly/10t0cO) na mpaghara.
Nọgide na-arụ ọrụ dị ukwuu. 🙂
Aug 11, 2009 na 4: 00 AM
Ejila ihe m na-emegbu onwe m na ChaCha - Amaara m na e nwere ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi mara mma n'ebe ahụ. M na-akatọ ndị ọzọ ego nke ChaCha mgbe e nwere ụmụ okorobịa dị ka m na pụtara ihe ndekọ na oké echiche iji kwado… ikekwe ọ bụ a bit nke ekworo. 🙂
M ga-elele webinar! Daalụ nke ukwuu maka ịkpọ oku. NA - ChaCha na-anabata gị mgbe niile ịme ọbịa ọbịa ebe a na Ahịa Technology Blog!
Aug 11, 2009 na 6:40 PM
Akwa! Echere m na m ga-eburu gị na post blog ọbịa! Chọọ ka ọ na-abịa n'ụzọ gị.